Iilwimi Izifundo kunye nezibonelelo
Amawaka angama-250 amawaka ayava ilizwi elikhuthazayo kwiLikhumbuzo yaseLincoln
Ngowe-1957, uMfundisi uDkt. Martin Luther King Jr waqalisa iNkomfa yoBungqina bobuKhosi baseMzantsi , eyayiququzelele imisebenzi yamalungelo abantu kulo lonke elaseMelika. Ngo-Agasti 1963, wahola uMatshi omkhulu eWashington, apho wazisa khona intetho engakukhunjulwa phambi kwabantu abangama-250,000 eSikhumbuzweni saseLincoln kunye nezinye izigidi ezibukele kumabonwakude.
Kwincwadi ethi "Iphupha: uMartin Luther King Jr kunye nentetho ephefumlelwe isizwe" (2003), uDrew D.
U-Hansen uthi i-FBI yasabela kwinkulumo kaKumkani ngale ngxelo ephazamisayo: "Simele simmakishe ngoku, ukuba asizange senze njalo ngaphambili, njengeNigro eyingozi kwixesha elizayo kuLwesizwe." Imbono kaHansen yentetho kukuba yanikela "umbono wento ekhusekileyo iMelika ekhangeleka ngayo kwaye ithemba lokuba lo mkhululo uza kuphuma olunye usuku."
Ukongeza kwimixholo ephambili yoMbutho weMalungelo oLuntu, " I-Dream I-Dream " inkulumo imodeli yoqhagamshelwano olufanelekileyo kunye nomzekelo onamandla we-African-American jeremiad . (Le nguqu yenkulumo, ebhaliweyo evela kwi-audio original, ihluke ngeendlela ezininzi ezivela kwiphepha eliqhelekileyo elithunyelwa kwiintatheli ngo-Agasti 28, 1963, umhla wokuhamba.)
Ndiyonwabile ukujoyina nawe namhlanje kwiinto eza kuhla embali njengembonakaliso enkulu kunenkululeko kwimbali yesizwe sethu.
Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, iMelika enkulu, esinesithunzi esingumfuziselo esimi namhlanje, sisayine iSimemo Sokumemezela. Isimiselo esiqakathekileyo safika njengesibonakaliso esikhulu sokubakhomba ithemba kwizigidi zabantu baseNigro ababegqitywa ngamatangatye omonakalo. Kwafika njengentsasa yokuvuyela ukuphelisa ubusuku obude bokuthunjwa kwabo.
Kodwa ikhulu leminyaka kamva, i-Negro ayisayi kukhululeka. Kwiminyaka eyikhulu kamva, ubomi beNigro bubuhlungu buhlungu ngenxa yeentlupheko kunye neetyunja zokuchaswa. Kwiminyaka eyikhulu kamva, i-Negro ihlala kwisiqithi esibuhlwempu esiphezulu phakathi kolwandle olukhulu lwezinto eziphathekayo. Kwiminyaka eyikhulu kamva, i-Negro isasweleka kwiindawo zaseMelika kwaye ifunyanwa ekuthinjweni ezweni layo. Kwaye ke siza apha namhlanje ukuze sidlale imeko ehlazo.
Ngomqondo othile, sifika kwikomkhulu yethu yesizwe ukuze sihlawule isheke. Xa abakhi beeRiphabhulikhi babhala amagama amnandi kuMgaqo-siseko kunye neSibhengezo soBu-Independence , babesayine i-note yokumisela kuyo yonke i-American yayiza kuba yindlalifa. Le ncwadana yayisisithembiso sokuba bonke abantu, ewe, amadoda amnyama kunye namadoda amhlophe, baya kuqinisekiswa "Amalungelo asemthethweni" "Ubomi, Ukukhulula nokuphandle Injabulo." Kucacile namhlanje ukuba iMelika ilahlekile kule ncwadana yokunyusa, ngokubhekiselele kubemi bayo bombala. Esikhundleni sokuhlonipha le mbopheleleko engcwele, iMelika inikeze abantu baseNigro ingxelo embi, isheke elibuye liphawulwe "imali enganeleyo."
Kodwa asifuni ukukholelwa ukuba ibhanki yobulungisa iyabhawulwa. Asifuni ukukholelwa ukuba akukho mali enganeleyo kwiindawo ezinkulu zokufumana eli thuba. Kwaye ke, sithengile le ngotshekhi, isheke eliya kusinika ekufuneni ubutyebi benkululeko kunye nokhuseleko lobulungisa.
Sifikile kule ndawo eyingcwele ukukhumbuza iMerika ngokukhawuleza ngokukhawuleza ngoku . Eli akusikho ixesha lokuzibandakanya kwi-luxury of cooling off okanye ukuthatha izilwanyana ezizinzileyo zokugqwesa iziqu. Ngoku lixesha lokwenene lokwenene izithembiso zentando yesininzi. Ngoku lixesha lokunyuka emfuleni obumnyama kunye nentshonkcenkcenkcazo yokuhlukana ukuya kwindlela yokukhanya kwelanga. Ngoku lixesha lokuphakamisa isizwe sethu kwizinto ezikhawulezayo zokungabikho kobuhlanga ngokobuhlanga obunzima bobuzalwana. Ngoku lixesha lokwenza ubulungisa bube yinyaniso kubo bonke abantwana bakaThixo.
Kuya kuba yingozi kwesi sizwe ukuba singaziboni ngokukhawuleza kwangoko. Ihlobo elidlulayo leNégro linganeliseki ngokusemthethweni aliyi kudlula de kubekho ikhefu ekomelezayo inkululeko kunye nokulingana. Ngo-1963 akusipheli, kodwa isiqalo. Kwaye abo banethemba lokuba i-Negro ifuna ukuvuthela umnqamlezo kwaye ngoku iya kuyaneliseka xa ihlaziya libuyela kwishishini njengesiqhelo. Kwaye akuyi kubakho ukuphumla okanye ukuthula eMelika kude kube neNigro inikwe ilungelo lokuba ngummi. Izivunguvungu zokuvukela ziya kuqhubeka zidibanisa iziseko zesizwe sethu kude kubekho usuku olusasazelayo lobulungisa.
Kodwa kukho into endiyithethayo kubantu bam, abemi emngceleni obushushu okhokelela kwibhotwe lobulungisa. Kwinkqubo yokufumana indawo yethu efanelekileyo, akufanele sibe netyala lezenzo ezingalunganga. Masiyifune ukuwanelisa ukoma lwethu lwenkululeko ngokusela kwendebe yobukrakra nenzondo. Simele senze umzabalazo wethu ngonaphakade kwisiza esiphezulu nesidima kunye nokuziphatha. Akufanele sivumele ukumbhikisha kwethu kokudala kube yinto enobundlobongela. Ngokuphindaphindiweyo, simele siphakame kwiindawo eziphakamileyo zeentlanganiso zokubambisana nomoya.
Intsha yamaritancy emangalisayo ebangele i-Negro yoluntu ayifanele isikhokele ekubeni singathembeli kubo bonke abantu abamhlophe, kuba abaninzi abazalwana bethu abamhlophe, njengokuba kubonakaliswe ubukho babo namhlanje, baye baqonda ukuba ikusasa labo libophelelwe ikusasa lethu . Kwaye baqonda ukuba inkululeko yabo ibophelelwe ngokukhululekile ukuba inkululeko.
Asikwazi ukuhamba yedwa.
Kwaye njengoko sihamba, simele senze isibambiso esiza kuhamba ngaso sonke isikhathi. Asikwazi ukubuyela. Kukho abo bacela abazinikezeli ngamalungelo oluntu, "Uza kunini na?" Asinakuze saneliseke njengoko iNegro ixhoba lezinto ezinobungozi ezingenakwenzekayo zamapolisa. Asinakuze siyanelisekile nje ngokuba imizimba yethu, enzima ngenxa yokukhathala kweendlela, ayikwazi ukufumana indawo yokuhlala kwiimoto zendlela kunye neehotele zemizi. Asikwazi ukwaneliseka nje ngokuba ukuhamba okusemgangathweni kweNigro kuvela kwi-ghetto encinci ukuya kwelinye elikhulu. Asinakuze saneliseke nje kuphela xa abantwana bethu behlulwa i-self-hood kunye nokuphangwa kwesidima sabo ngesibonakaliso esichaza esithi "Abagciniweyo Abaphela." Asikwazi ukwaneliseka nje ngokuba iNigro e-Mississippi ayikwazi ukuvota kwaye iNigro eNew York ikholelwa ukuba ayikho into yokuvota. Hayi, hayi, asinelisekanga, kwaye asiyi kuyaneliseka de kubekho ubulungisa buhamba njengamanzi nobulungisa njengomlambo onamandla.
Andiyi kukukhumbuza ukuba abanye benu beze apha bevela kwiimvavanyo ezinkulu kunye neengxaki. Abanye bakho bafika bevela kwii cell cell. Kwaye abanye benu bevela kwiindawo apho ukufuna kwakho - inkululeko yokuhlala inqabile ngokubethelwa yimivungu yentshutshiso kwaye igxininiswe yimimoya yamapolisa enobubi. Uye waba yizilwanyana zokubandezeleka. Qhubeka usebenza kunye nokholo lokuba ukuhlupheka kukhululekile. Buyela e-Mississippi, buyela e-Alabama, buyela e-South Carolina, ubuyele eGeorgia, ubuyela eLouisana, ubuyele kwimida kunye nemigqomo yamadolophu ethu asekumantla, ukwazi ukuba le meko ingakwazi kwaye iya kutshintshwa.
Masize sizithobe entlameni yokuphelelwa lithemba, ndithi kuni namhlanje, bahlobo bam. Kwaye ngoko nangona sibhekene nobunzima bwanamhlanje nangomso, ndisaba nephupha. Yiphupha eligxininise kakhulu kwi-dream yaseMerika.
Ndiliphupha ngelinye ilanga olu hlanga luya kuvuka luze luchaze intsingiselo yentsholongwane yalo: "Siyazibamba ezi nyaniso ukuba zibonakalise, ukuba bonke abantu badalwa bilingana."
Ndiliphupha ngelinye ilanga kwiintaba ezibomvu zaseGeorgia, oonyana bekhoboka langaphambili kunye noonyana babengabaphathi bekhoboka baya kuba nako ukuhlala phantsi ndawonye etafileni lobuzalwana.
Ndiliphupha ngelinye ilanga kwanelizwe laseMississippi, i-state eguguzelayo ngokushisa kokungabikho kokusesikweni, eguguzelayo ngentswelo yokucinezelwa, iya kutshintshwa ibe yi-oasis yenkululeko kunye nobulungisa.
Ndinephupha lokuba abantwana bam abancinane bahlale olunye uhlanga kwilizwe apho abayi kugwetywa ngombala wesikhumba sabo kodwa ngomxholo wabo.
Ndiliphupha ngelinye ilanga, phantsi kwe-Alabama, kunye neerhulnsi zalo, kunye nekarhuluneli yayo enomlomo wayo uhamba kunye namazwi athi "ukuchasisa" kunye "nokuguqulwa" - ngelinye ilanga apho eArabama abafana abancinci abamnyama kunye namantombazana amnyama baya kuba Unako ukujoyina izandla kunye namakhwenkwe amancinci amhlophe kunye namantombazana amhlophe njengoodade kunye nabazalwana.
Ndiliphupha ngelinye ilanga intlambo yonke iya kuphakanyiswa, nayo yonke intaba nentaba iya kugqitywa, iindawo eziqinileyo ziya kucaciswa, kunye neendawo eziphosakeleyo ziya kulungiswa, kwaye uzuko lweNkosi luya kubonakala inyama yonke iya kuyibona kunye.
Le ithemba lethu, kwaye lo lukholo lokuba ndibuyela eMzantsi.
Ngaloo kholo, siyakwazi ukukhupha entabeni yokuphelelwa lithemba ilitye lethemba. Ngaloo kholo, siyakwazi ukuguqula ukudibanisa kwelizwe lethu kwi-symphony ebuhle bobuzalwana. Ngelo kholo, siya kukwazi ukusebenzisana, ukuthandaza kunye, ukulwa kunye, ukuya entolongweni ndawonye, ​​ukuma inkululeko kunye kunye, sisazi ukuba siya kukhululeka ngemini enye.
Kwaye oku kuya kuba yimini - oku kuya kuba yimini apho bonke abantwana bakaThixo baya kukwazi ukucula ngeentsingiselo ezintsha:
Ilizwe lam ilizwe kuwe,
Umhlaba omnandi wenkululeko,
Ndiya kucula kuwe.
Umhlaba apho obawo bafa khona,
Ukususela ezintabeni zonke,
Yaye ukuba iMelika iya kuba luhlanga olukhulu, oku kufuneka kube yinyani. Kwaye ke inkululeko mayiyifumane kwiintaba eziphakamileyo zaseNew Hampshire. Inkululeko mayiye kwiintaba ezinamandla zaseNew York. Inkululeko mayiyeke kwi-Alleghenies ephakamileyo yasePennsylvania!
Mkhulule inkululeko evela kwiiRockies zaseColorado ezikhethiweyo zekhephu!
Inkululeko mayiyifumane kwiintlambo ezinqabileyo zaseCalifornia!
Kodwa kungekhona nje loo nto. Inkululeko mayiye kwiNtaba ye-Stone yaseGeorgia!
Inkululeko mayiye kwiNtaba yeThereout yaseTennessee!
Inkululeko mayiyeke kuyo yonke intaba kunye ne-molehill yaseMississippi. Ukususela kuzo zonke iintaba, makhulule inkululeko.
Kwaye xa oko kwenzeka, xa sivumela inkululeko yokukhawulela, xa siyivumela ukuba iveze kuyo yonke imizi kunye nayo yonke imizi, kuyo yonke indawo nakwiidolophu zonke, siyakwazi ukukhawuleza ngaloo mini xa bonke abantwana bakaThixo, amadoda amnyama, kunye Amadoda amhlophe, amaYuda kunye neentlanga, amaProthestani kunye namaKatolika, aya kukwazi ukudibanisa izandla aze ahlabelele ngamazwi endala e-Negro ngokomoya, esithi "Ukhululekile ekugqibeleni!
Idilesi Yokuvula I-John F. Kennedy
Walt Whitman's Thatha 'Slang in America'
HL Mencken kunye 'neLibido ye-Ugly'
Abahlaseli begrama: iiJokes, i-Riddles kunye ne-Word Play
'IWalden' kaThoreau: 'Imfazwe yeentsana'
I-Apology for Idlers nguRobert Louis Stevenson
Kwi-Rhetoric, okanye kwi-Art of Eloquence, nguFrancis Bacon
Jones v. Ecacileyo Creek ISD (1992)
Isicwangciso soMsebenzi esiPhumeleleyo soMhlaba weZero, 2002
24 AmaFilimi amakhulu kunye nee-Afrikansi amakhulu ahlaselayo
Amagqabi amaFatishist aLurk phantsi kweeTable zeThala leencwadi
Iingoma eziphezulu ezingabizi ngee-80s